Faah faahin:- Dagaal culus oo ka dhacay degmada Warsheekh ee gobolka Sh/dhexe – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Dagaal culus oo ka dhacay degmada Warsheekh ee gobolka Sh/dhexe
Wararka naga soo gaaraya degmada Warsheekh ee gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in dagaal aad u culus uu maanta halkaasi ku dhexmaray ciidamo ka tirsan militeriga Soomaaliya iyo kuwa maamulka degmadaasi.
Dagaalkaasi ayaa la sheegayaa inuu yimid kadib markii ciidamada militeriga ee ka amar qaata taliyaha ciidamada militeriga Soomaaliya Korneel C/qaadir Nuur Xasan Qoondhe ay weerar culus ku qaadeen saldhiga booliska degmada Warsheekh.
Labadaasi dhinac ayaa la sheegayaa inay dagaalkaasi isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana dagaalkaasi ku dhintay hal askari, iyadoona dhowr kale ay ku dhaawacantay.
Dhinaca kale, qof ka mid ah dadka deegaanka oo lasoo xiriiray warbaahinta Bulshoweyn ayaa u xaqiijiyay in dagaalkaasi uu salka ku haayo weerar ay ciidamada militeriga Soomaaliya xalay kusoo xireen 4 askari oo ka tirsan kuwa maamulka degmaadaasi Warsheekh.
Ciidamada saakay ku dagaalamay degmada Warsheekh ayaa la sheegayaa inay haatan isku horfadhiyaan gudaha degmadaas, waxaana taagan xiisad laga cabsi qabo in markale uu halkaasi dagaal ku dhexmaro labadaasi dhinac.
Wixii warkaan kusoo kordh dib kala soco Insha Allaah